PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-09-30 - Ulinda ucacisa ngezinyathelo ngokhozi FM
Ulinda ucacisa ngezinyathelo ngokhozi FM
Ilanga langeSonto - 2018-09-30 - Front Page - LUCKY CAIN
UTHI kubhakuza inhliziyo ngenxa yenjabulo ngokuhlanzeka kwegama lakhe ulinda ‘Mr Magic’ Sibiya okubikwa ukuthi utholwe yispecialised Commercial Crimes Court, egoli, engenacala ngolwesihlanu.
UMR Magic, obese kuphele iminyaka emithathu egqigqa enkantolo ngaleli cala, uthi kufana nokuthi kusuke umthwalo emahlombe akhe ngalesi sinqumo.
Ekhuluma NELANGA Langesonto ngemuva kokuphuma kwalesi sinqumo, umr Magic ubezwakala ukuthi ujabule uyafa.
“Ngeke ngiqambe amanga, ngijabule ngokweqile ngoba kuya njengamagama ami ukuthi ngimsulwa. Nangesikhathi ngixoshwa ngakuveza ukuthi ngimsulwa. Manje inkantolo isikuqinisekisile lokho,” kusho umr Magic osegxile kwezamabhizinisi.
Uthi okwamanje usalinde ukuhlala phansi nabameli bakhe badingide ngezinyathelo abazozithatha.
“Kumele ngikucacise ukuthi anginanxa noKhozi noma NESABC, ngakho noma yini ezokwenzeka ngisazimisele ukusebenzisana nabo,” kusho umr Magic.
Uthi ngasohlangothini lwakhe akukho okuphambene nomthetho akwenza njengoba nomcimbi owabe uxhasiwe ungenzekanga, kodwa wakwazi ukubuyisela emphakathini ngokuthengela ibandla langakubo amabhayibheli namajezi ebhola likanobhutshuzwayo nawebhola lomnqakiswano ezikoleni zaseshowe.
Ngokusho kwakhe, lolu daba lwabe lungayihlanganisi ISABC nokhozi FM njengoba lwabe luthinta inkampani yakhe ne-edcon. Usola ISABC ngokuthi yagagamela ngokumxosha engakalitholi ithuba lokugeza igama lakhe.
Uthi ngesikhathi exoshwa okhozini wabe esalelwe yiminyaka emibili kwinkontileka yakhe nalo msakazo. Phambilini umr Magic uveze ukuthi usakhala ngokungalitholi ithuba lokuvalelisa kubalaleli bokhozi njengoba axoshwa engalindele.
Uphinde wakuveza ukuthi usengabuyela kulo msakazo uma ithuba livela, kwazise umbhobho usazifela ngawo.
Utshele ILANGA Langesonto ukuthi uzohlangana nabameli bakhe kusasa ngomsombuluko athole izeluleko ngokumele akwenze.
U-MR Magic ugcine ukuzwakala kulo msakazo ngo2013 kanti uveze ukuthi uzobiza isithangami sabezindaba uma esesithathile isinqumo ngesinyathelo esiya phambili.
ISITHOMBE: INQOLOBANE YELANGA
UJABULE ufile ulinda Sibiya okubikwa ukuthi kuhoxiswe amacala enkohlakalo abebhekene nawo enkantolo.